Hydraulics Dhiraivha Mugadziri, Anotengesa, Fekitori - anoderedza, honye anodzora, honye gearboxes, mapuraneti magiya, anodzora anomhanyisa, akasiyana, helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, matarakita magiya, marori magiya, honye gearbox
Kunyangwe chako chigadzirwa chiri kufamba, kutendeuka, kugadzira, kuumba, kusimudza, kuchera kana kutakura, unogona kuvimba ne hzpt hydraulic zvigadzirwa kuti upe mashandiro anodikanwa kuti ugare uchikwikwidza. hzpt yakazvipira kuzvipira kuhutungamiriri hwayo mukufambisa uye maindasitiri maficha, ichiita hzpt mumwe wevanofarira vatengesi ve hydraulic masisitimu, zvikamu, zvinodzora uye mhinduro dzeinjiniya pasirese.
hzpt mapombi, mota, kutapudza, mavhavha, ma cylinders, madhairekita, hoses uye zvishandiso zvinopa yakasarudzika musanganiswa weyakavimbika tekinoroji uye hunyanzvi dhizaini, iyo inogona kushandurwa zvakananga kuita kuvimbika kuita uye kwenguva refu yekukwira. Kunyangwe iwe uchida chinhu chimwe chete, yakasarudzika-yakagadzirirwa mhinduro, kana chero chinhu chiri pakati, hzpt ndiye mudiwa wesarudzo yemafoni nemaindasitiri ekushandisa anongoda kushanda nemazvo.
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HGJ2.54-100-46-17.5-ZPL
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HGJ45-150-20-24-ZP
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HNYJ2.53-30-150-12-ZP
HYDRAULICS KUTYAira- WINCHES HLYJ6-160-135-26-ZP
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES IDJ23-10-30-14
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HYJ2.5B-50-55-12-ZP
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HYJ3-21-300-18-ZP
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HYJ3A-27.5-49-16-ZP
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HYJ3-40-49-18-ZP
HYDRAULICS KUTYAira- WINCHES HYJ6-140-135-26-ZPL
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES HYJ67-300-50-36-ZP
HYDRAULICS KUDHARA- WINCHES IYJ2.54-100-90-17.5-ZP
A hydraulic dhiraivha system kutyaira kana Kutumira system inoshandisa yakamanikidzwa hydraulic mvura kutyaira michina ye hydraulic. Izwi rekuti hydrostatic rinoreva kuendesa kwesimba kubva mukuyerera nekumanikidza, kwete kubva ku simba reinetic wekuyerera.
Iyo hydraulic drive system ine zvikamu zvitatu: Iyo jenareta (semuenzaniso a hydraulic pombi), inotyairwa ne mota yemagetsi, kupisa injini kana windmill; mavharuvhu, mafirita, pombi nezvimwe (kutungamira uye kudzora system); mota (semuenzaniso hydraulic mota or hydraulic cylinder) kutyaira michina.
Nheyo ye hydraulic drivepepeta
Mutemo waPascal ndiyo hwaro hwemagetsi emagetsi. Sezvo kumanikidza kuri muchirongwa kwakafanana, simba rinopihwa neaya mvura kune zvakakomberedza saka rakaenzana nekumanikidza × nzvimbo. Nenzira yakadaro, pistoni diki inonzwa simba diki uye pisitoni hombe rinonzwa simba hombe.
Iwo iwo iwo musimboti unoshanda kune hydraulic pombi ine diki yakatsvairwa vhoriyamu iyo inokumbira idiki torque, inosanganiswa ne hydraulic mota ine yakawanda yakatsvairwa vhoriyamu iyo inopa yakakura torque. Nenzira yakadaro kutapurirana nechimwe chikamu kunogona kuvakwa.
Mazhinji ma hydraulic dhiraivha masisitimu anoshandisa ma hydraulic cylinders. Pano imwecheteyo musimboti inoshandiswa - torque diki inogona kutapurirwa musimba rakakura.
Nekubvongodza hunyoro pakati pechikamu chejenareta nechikamu chemota, kana nekushandisa mapombi emagetsi uye / kana mota zvine chinogadziriswa chakatsvairwa vhoriyamu, chiyero chekutapurirana chinogona kuchinjwa zviri nyore. Kana iko kukwikwidza kuchishandiswa, kugona kwekutapudza kunogumira. Kana zvikagadziriswa pombi nemota, iko kushanda, zvisinei, kwakakura kwazvo. Muchokwadi, kusvika kuma1980, hydraulic drive system yaive isina kana kukwikwidza kubva kune mamwe anodzoreka masystem.
Mazuva ano, emagetsi dhiraivha masisitimu anoshandisa emagetsi servo-motors anogona kudzorwa nenzira yakanakisa uye anogona kukwikwidza zviri nyore nekutenderera hydraulic drive system. Hydraulic cylinders ari, zviripo, pasina kukwikwidzana kwemauto ane mitsara. Kune aya masirinda, hydraulic masisitimu anoramba achifarira uye kana sisitimu yakadaro iripo, zviri nyore uye zvine musoro kushandisa ino sisitimu kune anotenderera anotyaira eanotonhora masisitimu, zvakare.
Hydraulic masilinda (inonziwo mitsara hydraulic motors) ndeemagetsi actuator ayo anoshandiswa kupa simba rine mutsetse kuburikidza nesitiroko ine mitsara. Hydraulic cylinders anokwanisa kupa kusundidzira uye kudhonza masimba emamirioni emamitric metoni neyakareruka chete hydraulic system. Yakapusa hydraulic cylinders anoshandiswa mumuchina; pano, humburumbira hune vhoriyamu muchidimbu chesimbi neplunger yakasundidzirwa mairi uye yakasimbiswa nevhavha. Nekupomba hydraulic fluid mune vhoriyamu, iyo plunger inosundirwa kunze nechisimba cheplunger-nzvimbo kumanikidza.
Mamwe masilindiri akaomesesa ane muviri une chekuvhara chivharo, a pisitoni tsvimbo, Uye humburumbira musoro. Kune rimwe divi pasi pane, semuenzaniso, kwakabatana kune imwechete clevis, nepo kune rimwe divi, tsvimbo yepiston inofungidzirwawo neclevis imwe chete. Iyo humburumbira goko inowanzo kuve ne hydraulic kubatana kumativi ese; ndokuti, kubatana pazasi ezasi uye kubatana kune iyo humburumbira musoro padivi. Kana mafuta inosundirwa pasi pepiston, pisitoni tsvimbo inosundidzirwa kunze uye oiri yaive pakati pepistoni nemusoro wesirinda inosundidzirwa kumashure kutangi remafuta
Mukuru wedunhu dhayagiramu ye kuvhura chiuno uye yakavharwa chiuno maitiro.
Iyo hydraulic mota ndiyo inotenderera inoenderana hydraulic humburumbira. Chaizvoizvo, hydraulic mota inofanirwa kuchinjika neiyo hydraulic pombi, nekuda kwekuti chinoita basa rakapesana. Nekudaro, akawanda emagetsi mapombi haakwanise kushandiswa se hydraulic motors nekuti haakwanise kudzoserwa kumashure. Zvakare, hydraulic mota inowanzo gadzirirwa yekumanikidza kwekushanda mumativi ese emota. Mumwe mutsauko ndewekuti mota inogona kudzoserwa nevharuvhu inodzosera kumashure.
Kumanikidza mu hydraulic system kwakafanana nemagetsi mune emagetsi system uye kuyerera kwemvura kuyerera kwakaenzana neyazvino. Kukura uye kumhanya kwepombi kunoisa kuyerera kwekuyerera, mutoro pamotokari ndiwo unogadza kumanikidza.